Naqshadaynta Sharaxaadaha Xiriirka u dhexeeya SEO iyo Email Marketing
Email Marketing waa mid ka mid ah kaniisadaha ugu da'da weyn ee, sidoo kale SEO,ayaa si wanaagsan u qiimeeyay suuqyadda guryaha ee ROI. Si kastaba ha ahaatee, farsamooyinka Boostada Emailka waxay ka duwan yihiin xeeladaha, hawlaha,iyo dilida SEO. In SEO, waxtarka leh ee talada waxay ku xiran tahay awoodda aad IT gaar ah, macaamiisha, hay'adaha lammaanaha,iyo ficiladooda wada jirka ah
Artem Abgarian, Maamulaha Guusha Macaamiisha Sare Adeegyada Dijital ah wuxuu sharxayaa sida loo dhexgeliyo SEO iyo Email Marketing.
Sida ugu dhaqsaha badan ee suuq-geynta Emailka ayaa ah kan ugu qiimaha badan ee ay isticmaalaan dad badanganacsatada iyo milkiilayaasha ganacsiyada si loo dhiirrigeliyo, loo dhiso loona ilaaliyo cilaaqaadka macaamiisha, waxay noqonaysaa qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqadawaa u qalantaa dadaal. Waxyaabaha emailka si fiican u-fiicnaanaya waxay ku hawlan yihiin macaamiil badan oo suurogal ah waxayna hagaajinayaan fursadahaaga - sala giochi milano e provincial parks. Hoos waxaa ku qoran talooyinka ku saabsan sida loo sameeyoWax ku ool ah in ololaha suuq-geynta emailkaagu si wax-ku-ool ah u habboon.
1. Xulo oo ku maalgaliso adeeg bixiye E-mail weyn (ESP)si wax ku ool ah u saameeya dhibcahaaga sirta ah ee guud ee emailkaaga
2. Raac sharciga sharciga ee CAN-SPAM si aad u dhisto kalsoonida InternetkaAdeeg bixiyeyaasha (ISPs)
3. Abuur email email si loo yareeyo fursadaha isgaarsiintaadamacaamiisha ayaa inta badan ka doorbiday tarjumaadaha fiidiyowga
4. Kobcinta jihadaada adiga oo bixinaya farriimaha aan wax-xayeysiinta ahaynmarka hore la dhiso kalsoonida macaamiisha iyo ogaanshaha waxa xiisaha leh..
5. Sameey boggaga soo noqoshada inta badan alaabooyinka, adeegyada, iyodallacsiinta, iyo bixinta foomka saxiixa
6. Sheeg shayga. Dhammaan macluumaadka soo gudbiya dadka qaatainaad gujiso waa inay ka sarreysaa lakabta dhammaan waraaqaha elektaroonigga ah. Tusaale ahaan, ku darida magaca ururka oo leh wicitaan ficilkasi toos ah u horseeda website-ka ama adoo isticmaalaya magaca qofka qaata iyo xulashada liiska liistada heerarka sida loo xushay emailka mudnaanta.
7. Qaybta iyo liiska koritaanka. Ku darida qeybta horeQaliinka wuxuu keeni karaa dhalid sare iyo qiimaha guji.
8. Ku dar xiriiryada warbaahinta bulshada si aad uhesho kanada si aad uga qayb gasho martida internetkaiyo email-bixiyeyaasha ee dallacaadyada si ay u la socdaan ururkaaga
Waxaa jira laba siyaabood oo loo adeegsado SEO Audit website
Nuxur weyn oo leh erayo muhiim ah oo loogu talagalay waxay kordhisaa fursadahabogga lagu ciribtiro si sare loogu daro matoorada raadinta. Isla mar ahaantaana macluumaadka faa'iido leh ee wargeysyada iyo emaylada ayaa soo jiidanaya wax badanakhristayaasha oo kordhiya muuqaalka. Hoos waxaad ka heli kartaa siyaabaha ugu muhiimsan ee looga faa'ideysan karo isbarbardhigga labadaba SEO iyo Email-suuq-geynta labadaba
Iyadoo la adeegsanayo habka ugu fiican ee SEO-yada ah marka la soo saaro xog kooban
Ku darida jaantusyada kaniisadda ee loo yaqaan 'email'
Abuuritaanka waraaqo wargeys ah oo loogu talagalay falanqayn dheeraad ah
Qaadashada suuq-geynta gacanta
Tixgelinta mawduucyada mawduucyada emaylka
U dirista emeelyo fiidiyoow ah oo leh mawduuc shaqeynaya
ololeyaal raadin email ah oo ku socda baaritaan Google ah
SEO iyo Email Marketing waxay leeyihiin heerarka ROI ee sarreeya, sidaas awgeedwaxay ka caawisaa inay sawir qaadaan dhagaystayaasha dhagaystayaasha ah. Iyadoo la tixgelinayo qodobo kala duwan iyo sida loo isticmaalo qaab isku xiran oo lagu abuurayo warsidaha ayaa kaa caawin doona inaad qaadatointa badan ololeyaasha suuqgeynta suuqgeyntaada.